Farmaajo oo wajigabax kala kulmay daahfurka doorashada | KEYDMEDIA ONLINE
Farmaajo oo wajigabax kala kulmay daahfurka doorashada
Farmaajo ayaa wajigabax foolxun kala kulmay billaabashada doorashooyinka dalka, wuxuuna ku fashilmay bogaadinta iba-furka doorashada, kadib markii uu ku guuldarreysatay inuu hal kursi ka helo afarta kursi ee shalay lagu doortay Kismaayo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ku dhawaad 24 saac ayaa ka soo wareegtay doorashada afar kursi oo ka tirsan Aqalka Sare ee Baarlamaanka 11-aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, kuwaas oo shalay lagu doortay magaalada Kismaayo ee Xarunta ku meel gaarka ah ee Maamulka Jubbaland.
Hayeeshee, Farmaajo, ayaa ku guuldarreysatay in uu bogaadiyo jidka doorashada ee dalku qaaday, isla markaana wuxuu ku fashilmay inuu u hambalyeeyo xildhibaanadii ugu horreeyay ee kusoo baxa doorashada Aqalka Sare.
Farmaajo, oo muudo seynta ugu taagnaa in dalku u dareero doorasho la isla oggolyahay, ayaa u muuqda in uusan ku qanacsaneyn in waddanku doorasho aado, isla-maraana uu rabay muran daba-dheeraada iyo dagaallo dalka burburiya.
Dadka qaar waxa ay rumeysan yihiin, in aamusnaanta Farmaajo ay salka ku heyso, dagaalka soo jireenka ah ee kala dhaxeeya Axmed Madoobe, ee ugu danbayn looga guuleysaty iyo Sanatarada aysan salaanta iska qaadin ee shalay soo baxay.
Hayeeshee, qaar kale, ayaa ku doodaya in Farmaajo yahay Musharrax Madaxweyne, qasabna ku tahay inuu diro hambalyo guud iyo mid gaar ah intaba.
Afarta kursi ee shalay ka soo baxday Kismaayo, ayaa dhamaan ah isbadel-doon aan Farmaajo la tusin, waxaana kooxda Fahad iyo Farmaajo hoggaamiyaan waji gabax foolxun kala kulmeen billaabashada doorashooyinka dalka.
Xisbiga uu hoggaamiyo Madaxweynhii hore ee Soomaaliya Xasan Sheeh Maxamuud, ee UPD, ayaa ku guuleysatay in ay dib ugu soo laabtaan labo kursi, kuwaas oo kala ah C/llaahi Sheekh Ismaaciil (Fartaag) iyo Iftiin Xasan Iimaan Baasto.